DP World- waa shirkad noocee ah? Heshiiskii Djabouti iyo DP World ee bur-burayse raad intee le'eg ayuu yeelan kartaa gobolka geeska?
Tuesday February 27, 2018 - 22:33:17 in Maqaallo by Editor Caynaba News
Shirkadda caalamiga ah ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan DP World, ayaa ah mid ka hawl gasha dekedo ka badan illaa 100 marso
oo ay leeyihiin 40 dawladood. Shaqada ay qabataana waa hagidda iyo isku xidhka maraakiibta iyo marsooyinkaa. Waxa kale oo ay dhistaa dekedaha amma farsamaysaa qalabka casriga ah ee dejiya amma rara shixnadaha waaweyn ee aadka u culus amma u baahan qaboojiyayaasha waaweyn. Intaa waxa u dheer in ay shirkaddaasi samayso shaqo abuur, gaar ahaanna shaqaalaysiiso dadka xirfadda leh oo ay weliba siiso tababarro aad u sarreeya.
Shirkaddan DP World ayaa ku shaqaysaysa habka dhaqan dhaqaale ee casriga ah, nidaamkeeda ganacsiga ahina waa mid saami-lay ah, marba marka ka danbaysana waa mid uu dhaqaalaheedu aad u soo korayo. Shaqooyinka ay dekedaha ka qabato oo aad loogu ammaanayna waxa ay kobcisaa shirkadaha yar yar ee xirfadaha amma adeegga ku shaqeeya, oo ay siiso shaqooyin ku salaysan heshiisyo ( Contracts ama caqad ).
Dubai Port Inernational ( DPI ) oo la aas aasay sannadkii 1999, ayaa mashruucii ugu horreysey laga siiyey dekedda Jeddah boqortooyada Sacuudiga, shirkaddaasi oo ahayd shirkadda immiga noqotay DP World, waxana ay xilligaa heshiisyo la gashay shirkadda la yidhaa SCT. Sidoo kale shirkaddaa Dubai Port International waxa ay sannaddii 2000 mashaariic horumarineed ka samaysay dekedda Djabouti, waxa xigtay in ay sannaddii 2002 ka hawl gashay dekedda ganacsiga u ah dalka India ee la yidhaa Visakhapatnam ama magaceeda loo soo gaabiyo Vizag. Sannaddii 2003 dana waxa ay ka hawl gashay dekedda Constanța ee ku taalla dalka Romania. Dalalkaasi uun shirkaddani kuma ekaanine hawlo ay ka qabatay dalal kale ayaa u sii dheeraa.
2005tii waxa midoobay labadii shirkadood ee DPI iyo Dubai Ports Authority ( DPA ), waxana ay la baxeen DP World. Kadibna mar keliya ayaa shirkaddii ku tallaabsatay in ay iibsato afar shirkadood oo waaweyn isla markaana caalami ah oo ay ka mid tahay Peninsular and Oriental Steam Navigation Company ( P&O ). Lacagta ay ku iibsatayna waxa ay caga cagayneysey $7 Bilyan amma 7 kun oo milyan oo dollar. Qiimaha xilligaa ay lacagtu ahayd oo immiga saddex jibbaarantay ayaa ah mid qiimo badan ku fadhiday.
DP World iyo waddammada geeska.
Waddanka Djabouti waa dal ay xukuumaddiisu waaya arag ku tahay dawladnimada iyo la macaamilka caalamka, waxana ay ku shaqaysaa xeerka caalamiga ah. Siyaasadda dhaqaale ee ku salaysan fur furnaanta ee uu Madaxweyne Geelle ku tallaabsaday ama ku hoggaaminayo Djaboutina, waa tani keentay in ay shirkado badan oo caalami ahi ku soo qul qulaan dalkiisa yar ee ka ganacsada dekedaha. Taasina waxa ay abuurtay shaqo, dhaqaalaha dalka oo kor u kaca iyo xuddun dhaqaale oo ay u noqoto dalalka geeska.
Shirkadda DP World oo ka mid ah shirkadaha caalamiga ah ee ka hawl galay marsada Doraleh ee waddanka Djabouti, ayaa muddaba waxa diciifay xidhiidhiika uu la leeyahay Djbouti, muran badanina uu soo kala dhex galay. Ugu danbayntiina waxa ay Djabouti go'aansatay in ay dalkeeda ka erido shirkaddaasi DP World. Iyada oo u diyaar-garawday in ay u babac dhigto dacwad kasta oo ay DP World ku soo oogto. Djabouti-na maaddaama ay tahay dawlad madax bannaan oo macaamil la leh waddammo waaweyn oo dunida horumartay tah, ayaa laga shaki qabaa in ay shirkadaha China amma Korea ay dammaanad qaadeen kharash kasta oo kaga baxa dacwooyinka ay shirkaddaasi miisaanka lihi ku oo oogto. Ugu danbayntana, ay beddelkeeda shirkadahaasi geli doonaan.
Ujeeddada khilaafka Djabouti iyo DP World na waa mid dhaqaale, saamayn weyna ku yeelan kara xidhiidhka Dubai iyo Djabouti ama mandiqadda geeskaba. Waxanan arki doonnaa tallaabada tani xigta iyo wajiga ay yeelan doonto xidhiidhka Djabouti iyo Dubai amma UAE. Iyo raadka ay xoolaha laga dhoofiyo Djabouti ku yeelan doonaan dekedaha Jedda ama Dubai.
Somalia iyo Somaliland waa meel ay dunidu u aragto isku dal, oo ma jiro dal weli Somaliland u aqoonsan waddan madax bannaan. Djabouti-na labada dalba saamayn weyn oo dhaqan, dhaqaale iyo siyaasadeedba way ku leedahay. Laakiin Somalia waa dal madax bannaan oo misna qorshayaashiisa iyo wixii u dan ah u madax bannaan. Halka aanay Somaliland wax badan u madax bannaanayn.
Heshiiska Somaliland iyo DP World ayaa iyaguna salka ku haya xaqiiqooyinkaasi aan soo sheegnay, khilaafka Djabouti iyo DP World na aad ayey u saamayn doontaa. Xukuumadda Muse Bixi ee caydiga ahina, waxa xilligan hor yaalla tallaabadii ay DP World heshiis rasmi ah kula geli lahayd amma heshiiskii hore uga bixi lahayd iyo talada waaya aragga leh ee ay uga fadhido Djabouti.
Dhinaca kale waxa khalkhal weyn ku haya dimuqraadiyadda amma xoriyatul qawlka ka jirta Somaliland oo ay qabyaaladduna qayb ka tahay iyo sidii ay xukuumaddu isku waafajin lahayd rabitaanka shacabka degaannada amma guud ahaanba shacabka reer Somaliland iyo heshiisyada dhulka amma dekedaha ee ay siyaasiyiintu kala macaashayaan ama kala dillaalayaan. Balse aan shacabka waxba ka soo gaadhayn. Hadallada iska dillaalnimada ah ee ay hoggaamiyayaasha xisbiyadu ku sharxayaan khilaafka Djabouti iyo DP World amma aan si xor ah looga doodayn golayaasha sharci dejintu waxa ay abuuri doonaan in ay Somaliland ku fashilanto heshiiska DP World iyo saldhigga Meletari ee ay la gashay UAE.
Hadallada siyaasiyiinta qaarkood ay ku hadlayaanna waxa ay abuuri karaan xanaf ama dhaawac ay kaga fogaanayaan Dubai amma Djabouti. Ta ugu yaabka badanina waa xidhiidh la'aanta aanay warba iska hayn Somaliland iyo Somalia. Ee weliba ay Somaliland isku aragto in ay la siman tahay Somalia.
Puntland iyo Kismayo port waa degmooyin hoos yimaadda Somalia, oo heshiisyadoodu aanay ku xidhnayn uun dekedahaasi, balse ay la kaashadaan dawladda Muqdisho.